Izay lafitsarany banjinina… | NewsMada
Izay lafitsarany banjinina…
Izay be fanahiana loatra, tsy mahatantera-java-kinasa. Fisalsalana hatrany mantsy ny androatokom-piainany ka tsy sahy manapa-kevitra. “Sao lahy ka… Mety ho izao ny voka-dratsin’ity na izaroa raha atao…” Izay ilay fomba fisainana tsy mijery afa-tsy ny lafiratsiny hatrany. Fitaizan-tsaina io ka tsy ho afaka amin’izany ny olona iray raha tsy mitsabo tena mitsinjo izay tsara amin’ny zava-misy manoloana azy.
Mety ho maro izao ny hanakiana indray ny fitondram-panjakana amin’ny fanapahan-kevitra nambaran’ny filoham-pirenena amin’ny fanidiana ny sisin-tany noho ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus. Na mbola ao amin’ny “dingana (stade) 0”, tsy mbola ahitana ity areti-mandoza ity, aza i Madagasikara, mila mailo tsy hidiran’izany eto. Loza aman’antambo io ka mila arovana. Fahasahiana noho ny fijerena ny tombontsoan’ny rehetra fa tsy ny an’olom-bitsy.
Marina fa tsy maintsy hiantraika amin’ny vidim-piainana ny zava-misy, saingy aleo misoroka toy izay mitsabo. Rehefa tsy tafiditra ny entana avy any ivelany, izay dradrain’ny sasany fa mamelona ny vahoaka malagasy, hahazo laka ho azy ny fitrandrahana ny harena miavosa eto an-toerana. Tsy mahantra i Madagasikara fa ahitana izay ilaina rehetra. Ny fitrandrahana izany no odian-tsy hay fa ny hanafatra izay efa vitan’ny hafa ary hanondrana ny vokatry ny tena no nahamay hatramin’izay. Hiroborobo ny indostria madinika sy salantsalany ary hahazo aina ny vaventy satria “voatery hanjifa ny vita gasy” ny rehetra. Iainana tokoa izany fa tsy atao imolotra fotsiny. Tsy midika akory izany hoe tsy ilaina ny fanafarana avy any ivelany.
Manoloana izany, aoka ho tony fa tsy hamela ny vahoaka ho irery ny fitondrana, ary ny valalabemandry koa, tsy hamela hiasa irery ny mpitondra. Ny ahiahy tsy ihavanana ka mila firaisan-tsaina raha tiana ny hanohitra izay fanetriben’ny firenena, na aretina io na olona.